मेनुकाविरुद्ध पूजाको बयानः सुरुमा आश्रय दिइन्, वर्षौं शोषण गरिन् | Daily State News
मेनुकाविरुद्ध पूजाको बयानः सुरुमा आश्रय दिइन्, वर्षौं शोषण गरिन्
१८ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०९:३१ मा प्रकाशित - डेली स्टेट न्युज
तर, बिहीबार तीनै पूजाले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू थप शोषणमा परेको बयान दिएकी छन् । आफूसहित रक्षा नेपालमा आश्रित बालबालिकामाथि ज्यादती भइरहेको भन्दै छानविनको माग गरेकी छन् । पूजाले भनेकी छन्, ‘म रक्षा नेपाल र सञ्चालक मेनुका थापाबिरुद्ध सडकमा आएकी होइन, उहाँले मलाई पर्दाखेरी साथ सहयोग गर्नुभयो । तर, जति मलाई सहयोग गर्नुभयो, त्यो भन्दा बढि अत्याचार गर्नुभयो, शोषण गर्नुभयो ।’
‘म मानसिक रुपमा कमजोर बनेकी थिएँ, त्यो बेलामा समेत उचित माया पाउन सकिनँ ।’
राति १२ बजेसम्म भाडा माझ्न लगाउनेदेखि कलेज पढ्दा खाजा खर्च समेत नदिएको उनको गुनासो छ । रक्षा नेपालकी सञ्चालिका थापाले आफूहरुलाई बलात्कार पीडित बालिका भनेर देखाएर दाताहरुबाट रकम दिने र आफन्तलाई सुविधा दिनेदेखि निजी घर जोडेको पूजा बोहोराको आरोप छ ।
पुजा बोहराले वाचन गरेको अपिल
तर, ‘मैले आमा अंग्रेजी भाषा सिक्न जान्छु, कम्यूटर कक्षा लिन जान्छु भन्दा तेरो बाउ राम सिंहले पैसा दिन्छ’ भन्दै गाली गरेर टार्नु हुन्थ्यो । तीन महिने बिदामा मैले केही पनि सिक्न पाइन ।
मलाई डर, त्रासमा पारी कब्जामा मात्र राखियो । त्यसपछि ११ कक्षामा भर्ना गर्ने बेलामा पनि आमाले मैले भने बमोजिम केही गर्नुभएन ।
सतुङ्गलमा रहेको घरमा लगेर सबैले खाएको जुठा भाँडा माझ्ने काममा लगाइयो । तर मलाई केही न केही सिप सिक्न इच्छा थियो । मलाई झुक्याई झुक्याई गाली गरी गरि कुनै पनि क्लास नपठाइकन घरमा भाँडा माझ्ने काम गर्न मात्र लगाइयो ।
१२ को रिजल्टमा म प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएँ । त्यसपछि ‘ल’ पढ्ने तयारी कक्षा पढ्नु पर्‍यो भनेँ । संस्था र आमाबाट सहयोग प्राप्त भएन ।
मैले सबैसमक्ष अनुनयविनय गरेपछि रक्षा नेपालकै लोचना नेपाल म्यामले कापी किनिदिनु भयो । तर, आमाकोसामु कति रुँदा–कराउँदा पनि नानाथरीका गफ लगाएर टानुहुन्थ्यो । पहिलो वर्ष लैनचौरबाट नै विजुलीबजार धाएँ ।
त्यहाँ जाँदा लाग्ने गाडि भाडा माग्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो । मलाई माग्नै अप्ठ्यारो हुनेगरी तथा नाम अपशब्दहरुले गालीगलौच गर्नुहुन्थ्यो ।
म एकदिन विरामी पनि भएँ । रुपाली आन्टीले फोन गर्दा आमाले फोन नै अफ गरेर राखिदिनुभयो, मलाई औषधीउपचार गर्नुको साट्टो ।
होस्टेलको आन्टीले पनि मलाई तिमी पैसा नतिरेको मान्छे हो, नौ हजार तिर्ने विद्यार्थीलाई राख्नु पर्‍यो भन्दै मलाई कोठा सार्नु हुन्थ्यो ।
भोलिपल्ट आमाले पनि होस्टेल छोड् भन्दै आफन्तकोमा जान भन्नुभयो । म छक्क परेँ । एक्कासी आमाले नै आफन्तकोमा जा भनेपछि म सबै सामान लिएर रक्षा नेपालमै गएँ ।
म रक्षा नेपाल गएपछि आमाले ‘अब त काँ जाने हो, जा यहाँ तेरो लागि कुनै पनि ठाउँ छैन’ भनेपछि म एक्कासी आत्तिएँ ।
यसरी मलाई कलेज पढिराखेको मान्छे कहिले कता त ? कहिले कता ? भन्दै पठाउने काम भयो । मेनुका आमाको त्यो ब्यवहारले मलाई अतिनै असैह्य पीडा महसुश भइरहेको छ ।
सावित्री पुडासैनी मसाजमा काम गर्नुहुन्छ । उहाँको कोठामा पठाउन खोजेपछि म रक्षा नेपालको बाहिरै बसे ।
आमा मेनुका थापाले मेरो फेसबुक पनि उहाँको लक्की नम्बरमा खोल्नु भएको कुरा मलाई राम्रोसंग थाहा छ । मेरो फेसबुक पनि आमा मेनुकाले आफै चलाउनुहुन्थ्यो ।
आफ्नै बारेमा राम्रा–राम्रा कुराहरु पोष्ट गर्नुहुन्थ्यो । जुन कुराले उहाँलाई राम्रो हुन्थ्यो ।
तर, उनीहरुको भित्री अवस्था दयनीय छ । उनीहरुलाई समेत सरोकारवाला निकायहरुबाट अवलोकन गरियोस् । उचित बस्ने ब्यवस्था र शिक्षादिक्षाको ब्यवस्था गरियोस् ।
उनीहरुलाई पनि मलाई जस्तै कब्जामा राखिएको छ, ताकी संस्थाको कुनै पनि कुरा बाहिर नजाओस् भनेर ।
म तिरस्कारमा परे । किन परे मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन । तेक्वान्दो प्रशिक्षणका बेला मलाई अन्य काममा लगाइन्थ्यो । जुन दिनदेखि मैले जितेको गोल्ड मेडल आमाको हातमा पर्‍यो, त्यस दिनदेखि मैले त्यो जितेको गोल्ड मेडल र सर्टिफिकेट हेर्नसम्म पाएको छैन ।
त्यो गोल्ड मेडल र सर्टिफिकेट दराजमा ताल्चा मारेर राख्नुभएको छ । आजसम्म रक्षा नेपालको प्रायजसो कार्यक्रममा मलाई सहभागी गराइन्न ।
रुटस् फर लाइफ, हेल्प इन्टरनेशनल, क्यारोला घोस, लेश्ली ब्राउनलगायत थुप्रै विदेशी तथा स्वदेशी दाताहरुले सहयोग गरेका छन् ।
होस्टलमा राख्दा विना सम्झौता माता पाथीभरा गल्र्स होस्टेलमा राखिदिनु भयो । होस्टेलमा पनि मलाई सम्पूर्ण सुविधाबाट बञ्चित गराइयो । ०७४ साल मंसिर १७ गतेबाट होस्टेलमा बसेता पनि हालसम्म होस्टेलको शुल्क नतिरेकै कारण मलाई होस्टेलबाट निकालियो ।
कलेजमा पढ्दा शुरुका एक वर्षसम्म कलेज शुल्क तिरिएन भनें भर्नाको त कुरै भएन । तर, पनि कलेज प्रसाशनलगायत कलेजका प्रिन्सिपल देवेन्द्र भण्डारी सर र अनिता थापा म्यामले मलाई राम्रो व्यवहार गर्नुभयो ।
जनकनाथ कलेजका प्रिन्सिपल हरि सापकोटा सरले म र मानुसीप्रति ठूलो सहयोग गर्नुभएको छ । उहाँको सहयोग म बाचुञ्जेलसम्म विर्सने छैन ।
रक्षा नेपालको शरणमा आएकी पीडित बहिनी मानुसीलाई पनि विभिन्न टचर दिइरहन्थे । उनले ल्याएको कपडा र पैसा दिइन्नथ्यो ।
उनको दाजुले खाजा खान छाडेको पैसा पनि खोसेर राखिन्थ्यो । जनकनाथ कलेजमा बल्लतल्ल भर्ना गरिदिएता पनि अन्य कुनै पनि सहयोग गरिएन । विभिन्न टचर दिएपछि उनको दाजुले ७ महिना जतिपछि त्यहाँबाट फिर्ता लग्नुभयो ।
उहाँ पनि एउटा प्रमाण हो । पीडित परिवारको सदस्य भएकाले उहाँलाई पनि धेरै कुरा थाहा छ । बहिनी झनै पीडामा छिन् ।
उनको पनि हालसम्म नागरिता बनेको छैन । मोरङ्ग जिल्ला अदालतले वहिनीको विपक्षमा मुदाको फैसला गरेको छ । तर, रक्षा नेपालले बहिनीको लागि एउटा वकिल समेत राखेन । थप कुरा उनीबाटै बुझ्न सक्नु हुन्छ ।
मलाई न्याय नमिलेसम्म तपाईको साथ र सहयोग चाहिन्छ । मेरो पीडालाई सँधैका लागि शान्त पार्ने, श्वास फेर्न र मलाई स्वतन्त्रताको साथ डरत्रास विना नै हिडडुल गर्ने बाताबरण बनाउन म अपिल गर्छु ।